မေမေတို့မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ကို ကြမ်းတမ်းစွာ လှုပ်ရမ်းခြင်းရဲ့ အန္တရာယ် - Lifestyle Myanmar
ကလေးငယ်တွေရဲ့ သဘာဝက အများကြီးငိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာ နားမလည်နိုင်လောက်အောင် အဆက်မပြတ် အော်ငိုနေတတ်တဲ့ အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ရှည်တဲ့ မိခင်ဖြစ်ပါစေ ဒီလိုအချိန်မှာ တခါတလေ ဒေါသထွက်မိတာရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးအငိုမရပ်တာကြောင့် ဒေါသထွက်ကာ မိဘ (ဒါမှမဟုတ်) ကလေးထိန်းသူဟာ ကလေး ပခုံးကိုကိုင်ပြီး အလွန်အကျွံကိုင်လှုပ်လိုက်တာမျိုး လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် တခါတလေ ကလေးအငိုမတိတ်တဲ့အပြင် shaken baby syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုးဝါးသောအခြေအနေတစ်ခုကို ဦးတည်စေပါတယ်။
shaken baby syndrome ကဘာလဲ?
Shaken baby syndrome (SBS)ဆိုတာ မွေးကင်းစကလေးကို မိဘ သို့ ကလေးထိန်းသူက ကြမ်းတမ်းစွာ လှုပ်ရမ်းခြင်းကြောင့် ဦးခေါင်းကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက မွေးကင်းစကလေးကို ပုခုံး (သို့) လက်မောင်းကနေကိုင်ပြီး ခေါင်းကို ရမ်းသွားအောင် လှုပ်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် shaken baby syndrome ကို child abuse ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Shaken Baby Syndrome ဟာမွေးကင်းစကလေးအားလုံးမှာ အန္တရာယ်ရှိတာလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ နို့စို့ကလေး ဘယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုမဆို shaken baby syndrome ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို ၆လအသက်အရွယ်နှင့် တစ်နှစ်အသက်အရွယ်တွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ နူးညံ့တဲ့ ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရှိပြီး ဦးခေါင်းခွံအရိုးတွေဟာ မဆက်သေးပါဘူး။ လည်ပင်းကြွက်သားများဟာ ခေါင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်ခနဲ ရပ်ဖို့ အလုံအလောက် မသန်မာသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေဟာ ဦးခေါင်းရဲ့ ရုတ်တရတ်လှုပ်ရှားမှုက ပြင်းထန်မှု နည်းတယ်ဆိုရင်တောင် ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို လှုပ်ရမ်းတဲ့အခါ ဦးခေါင်းခွံ အတွင်းက ဦးနှောက်ဟာ ခုန်နေပြီး ဦးခေါင်းခွံနံရံတွေကို ရိုက်မိပါတယ်။ ဒီဆောင့်မိခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ အတွင်းကြေဖြစ်နိုင်ပြီး ရောင်ရမ်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ပြင်ပရှိသွေးကြောများဟာ ဦးခေါင်းခွံအတွင်း သွေးထွက်မှုနှင့် ဆောင့်မိခြင်းကြောင့် ပေါက်သွားတာတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒဏ်ရာနှင့်အတူ သွေးထွက်ခြင်းက ထာဝရ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုကို တောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ကို ပုခက်ထဲမှာ အိပ်နေစဉ် သို့ နူးညံ့တဲ့ မွေ့ယာပေါ်မှာ အိပ်နေစဉ် လှုပ်ရမ်းခဲ့ရင်တောင် SBS ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်လှုပ်ခြင်းကလည်း ကလေးတွေမှာ ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေလုပ်ရင် SBS မဖြစ်ဘူးလဲ?
အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဖြစ်ရပ်များက SBSကို မဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
သင့်လက်မောင်းပေါ်မှာ ညင်သာစွာ ထွေးပွေ့ပြီး ယိမ်းနွဲ့ခြင်း။
သင့်လက်ပေါ်မှာ ကလေးကို ချီပြီး မြန်မြန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရွရွပြေးခြင်း။
ကလေးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါ မတော်တဆ လဲကျခြင်း (သို့)ပရိဘောဂနိမ့်နိမ့်ပေါ်က ကျခြင်း။
ကလေးကို လေထဲမှာ မြှောက်ခြင်းနှင့် ကလေးကိုချီပြီး ပြေးခြင်းက SBSကို သေချာပေါက်ဖြစ်စေမယ်လို့ မပြောနိုင်သော်လည်း ရှောင်ရှားရပါမယ်။
SBS ရဲ့လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
ကလေးရဲ့ ဦးခေါင်းအတွင်းမှာ ဒဏ်ရာရခဲ့ရင် သိသာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာတွေ အများစုဟာ ကောက်ခါငင်ခါ ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ shaken baby syndrome ရဲ့ ပြင်ပလက္ခဏာများကတော့
အစာစားမှုပုံစံ ရုတ်တရက်ပြောင်းလာခြင်း- ကလေးဟာ ပုံမှန်အချိန်မှာ အစာကျွေးလို့မရတာ၊ မစားဘဲနေတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါက အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးမှုကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
အမြဲမှိန်းနေခြင်း- eye socket ကြမ်းတမ်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျက်ဆန်မှာ ဒဏ်ရာရခြင်းရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားရင် အမြင်အာရုံတောင် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
စကားပြောပြောင်းလဲခြင်း- စကားပြောနေရင်း ရုတ်တရက် စကားတွေထစ်လာပါတယ်။
အပြုအမှုပြောင်းလဲခြင်း- ဂျီကျလာတာ၊ စိတ်တိုလာတာ စတဲ့ အပြုအမှုတွေ ပြောင်းလာပါတယ်။
လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး အားမရှိသလို ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နာကျင်မှုကြောင့် ခဏခဏ ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ငိုပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်းကြီးတဲ့ ကလေးတွဆိုရင် သူတို့ နာကျင်နေတဲ့ နေရာကို ညွန်ပြပါလိမ့်မယ်။ အကြားစွမ်းရည် ဆုံးရှုံးလာပါတယ်။
ဆရာဝန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ မြန်မြန်ပြသင့်လဲ?
ကလေးကို အကြမ်းပတမ်းလှုပ်ရမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာတွေက အောက်ပါလက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်။
တတ်ခြင်း၊ retinal hemorrhage Chronic vomiting လို့ခေါ်တဲ့ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းမှ သွေးထွက်ခြင်း၊ အသားအရေ ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်လာခြင်း၊ ငယ်ထိပ်ပေါ်မှာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခြေလက်တို့ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရတဲ့ ကလေးတွေမှာ နို့စို့ကလေး ၂၅%လောက်က သေဆုံးပြီး ၈၀%နီးပါးဟာ သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မသန်စွမ်းဘဝဖြစ်သွားတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် SBS မဖြစ်အောင် တားဆီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးအပေါ် စိတ်ရှည်ပြီး သင့်စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။ စိတ်ချရတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်ကို ပေးချီပါ။ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင် ပုခက်ထဲမှာ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်လောက် ထားလိုက်ပါ။ ဒါက ကိုယ့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် အချိန်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးအပေါ် ဒေါသပုံချမိတဲ့ အဖြစ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။